DEG DEG:- Mid ka mid ah ergada beesha Murudsade ee ku sugan Cadaado oo la dilay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Mid ka mid ah ergada beesha Murudsade ee ku sugan Cadaado oo la dilay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in goordhaw lagu kala cararay xarunta ay ka socotay doorashada xubnaha Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii halkaasi lagu dilay mid ka mid ah Ergadii soo dooran laheyd xubnahaasi.
Ninkaasi la dilay oo lagu magacaabi jiray C/laahi Caraale Dibed ayaa la sheegayaa inuu ka mid ahaa Ergada beesha Murudsade soo dooran laheyd xubnaha beeshaasi u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ilaa iyo haatan lama oga cidda sida rasmiga ah u dishay ninkaasi, balse warar aan la xaqiijin ayaa sheegayaan in dilkaasi ay geysteen ciidanka AMISOM oo goobta ilaalada ka haysay, kadib markii ay ninkaasi ka shakiyeen.
Ma jiro wax faah faahin intaas dheer oo laga helayo dilka ninkaasi, iyadoona goobta uu dilka ka dhacay ay haatan tahay mid xaaladeedu kacsan tahay.
Ciidanka nabad-sugidda maamulka Galmudug oo goobta uu dilka ka dhacay soo gaaray ayaa bilaabay baaritaano la xiriira sida ay wax u dhaceen iyo shaqsigii dilka ka dambeeyay.
Dilka ninkaan ayaa la sheegayaa inuu dhacay waxyar un kadib markii la doortay musharaxa Mustaf Dhuxuloow oo doorashada kula tartamaayay musharaxa kale ee lagu magacaabo Axmed Mukhtaar Maxamuud oo doorashada isaga tanaasulay.